महिलाको अवस्था विश्वभर उस्तै हो :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
चितवनको शरदपुर माविमा १३ वर्ष पढाएकी राधा पौडेल यतिखेर अमेरिका बस्दै आएकी छन् । डेढ दशकदेखि गीतसंगीतमा लागेकी राधा हाल एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति अमेरिकाकी उपाध्यक्षसमेत हुन् । समय र परिस्थतिले विदेशिनु परेको बताउने उनी अमेरिकामा बसे पनि आफू नेपाली भाषा र संस्कृति संरक्षणमा भने लागिरहेको बताउँछिन् । अमेरिकामा मोबाइल व्यवसाय गरिरहेकी उनी अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य नेपाली समाजको पहिलो पुरस्कारको प्रायोजकसमेत हुन् । प्रस्तुत छ, तरुणका लागि राधासँग पत्रकार सृजना अर्यालले गरेको कुराकानीका अंश :
० के गर्न‘हुन्छ अमेरीकामा ?
– अमेरिकामा पनि नेपाली भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्न एकसाथ विभिन्न चाडपर्व मनाउने गरेका छौं । नेपालीहरूले विभिन्न संघसंस्थामार्फत नेपालीपन बचाउन धेरै काम गर्न‘भाको छ । हामीलाई हाम्रो संस्कृति नै प्यारो छ । त्यसैले सबै राज्यमा सामुदायिक भवन, पाठशाला खोल्ने अभियानमा हामी छौं । हाम्रा स–साना बालबच्चाका लागि मात्र नभएर त्यहाँ रहेका अन्य नेपालीका लागि पनि यो आवश्यक छ । हाम्रा बालबच्चाले त्यहाँ नेपाली नै बोले भने पनि ठूलो लाग्ने भाको छ ।
० अमेरिकाी साहित्यको नेपालीसँग तुलना गर्न‘पर्दा के भन्नु हुन्छ ?
– आममहिलाको अवस्था विश्वभर उस्तै हो । अमेरिकामा पनि राजनीतिकर्मी महिलालाई चुुनौती नै छ । जुन कुरा गत वर्ष सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनले पनि पुष्टि गरेको छ । सन्तानको स्याहार सुसारमा महिलाकै दायित्व अमेरिकी महिलामा पनि छ । आर्थिक रूपमा सशक्त हुने हुनाले उनीहरू विभेदमा परेको कम देखिएको मात्र हो । नेपाली महिलाको अवस्था सुधार्न पनि आर्थिक रूपले महिलालाई सक्षम पार्न‘पर्छ ।
Tarun Khabar0response सोमबार,२० कार्तिक २०७४ 102 Views